Maamul Midab Daabacan: Dhoofinta RBG illaa CMYK | Abuurista khadka tooska ah
Judit Murcia | | Design Graphic
Waa muhiim inaan maskaxda ku hayno in midabka shaashadda (RGB) muuqaal ahaan la mid ma ahan warqadda (CMYK). Kahor intaadan dirin a mashruuca ugu dambeeya si loo daabaco waa inaan hubinaa inaan nahay dhoofinta faylasha qaabka midabka leh CMYK si ay midabka ugu dambeeya ugu dhawaw sida ugu macquulsan midka aan shaashadda ka aragno.
Xitaa iyada oo la tixgelinayo dhoofinta CMYK, waxaa jira arrimo badan oo kala duwanaan kara natiijadeena ugu dambeysa. Nooca warqadda aan dooranayno inaanu daabacno, nooca gulufyada midabka, iyo dhinacyada kale ee yareyn kara isbeddelada.
1 Midabada Pantone
2 Websaydhada beddelashada
6 Codso tijaabada midabka
El pantone waxaa loo arkaa a qalabka aasaasiga ah loogu talagalay xirfadlayaasha naqshadeynta garaafka. Waa librería midabada taasi waxay hubin doontaa inaan helno midabka la rabo, taasi waa, waa tixraac midab. Faylasha aan dirno si aan u daabacno, xitaa haddii ay yihiin madbacado kala duwan, waxay haysan doonaan isku midab.
Waxaa jira qalabyada internetka taasi waxay kaa caawin doontaa inaad u beddesho midabada naqshadahaaga daabacaadda.
Qalabkan khadka tooska ah waxaad ku shaqeyn kartaa si aad u abuurto iswaafajinno iyo midabbo midab leh. Waa a Midabka midabka kaas oo aad ugu dhex wareegi karto midabkiisa, khaanadaha iyo laydhadhka. Taasi way kuu ogolaaneysaa tijaabi isku-darkaaga.
Adobe sidoo kale waxay leedahay giraangiraha midabkeeda si ay nooga caawiso inaan gaarno midabkeenna ku habboon. Hayso maktabad palette wadaag ah ayaa la heli karaa adeegsadayaasha si ay u isticmaalaan oo u keydiyaan haddii aad leedahay koonto adobe.
Waa a kordhin dheeraad ah oo waxtar leh oo kuu oggolaan doonta inaad ku doorato midab kasta oo ku dhex yaal bogga internetka. Sida indha fiiqista barnaamijkeenna naqshadeynta, midabkeedu noo sheeg hal guji midab isla markiiba.
Ahaanshaha a kordhin, waa inaad kala soo degsataa biraawsarkaaga. Waa la heli karaa labadaba Chrome sida Firefox.
Codso tijaabada midabka
Tilmaam, haddii aadan ogeyn inay jirto, kaa caawin kara xirfad ahaan, waa inaad weydiisato mid tijaabada midabka bilaashka ah. Tan ayaa noo oggolaan doonta iska ilaali wax dhibaato ah oo leh maareyn midab leh. Madbacado badan ayaa fulin doona iyaga oo aan wax dhibaato ah qabin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Maareynta midabka daabacaadda